कहाँ कहाँ लगानी छ क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ?
एजेन्सी । पोर्चुगल तथा युभेन्ट्सका स्टाइकर क्रिस्टियानो रोनोल्डो विश्वकै सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडीहरुको सुचीमा पर्छन् । मध्यम वर्गिय परिवारमा हुर्केका उनले सुरुका दिनमा धेरै नै दुख देखेका थिए । उनकी आमा अरुको घरमा खाना पकाउने काम गर्थिन् भने बुबा नगरपालिकामा मालीको काम गर्थे ।
रोनाल्डोलाई ‘मार्सा लिजेन्ड अवार्ड’
एजेन्सी । पोर्चुगिज तथा इटालियन क्लब युभेन्टसका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले ‘मार्सा लिजेन्ड अवार्ड’ प्राप्त गरेका छन् । नेपाली समयअनुसार सोमबार राति १० बजे स्पेनमा ‘मार्सा लिजेन्ड अवार्ड’ प्रदान गरिएको थियो ।
रोनाल्डोभन्दा मेस्सी अगाडि !
एजेन्सी । विश्व फुटबलमा मेस्सी र रोनाल्डो कैयौं रेकर्डहरु रहेका छन् । दुवैका संसारभरका फ्यानहरुमा को उत्कृष्ट हुन् भन्ने कुराको विवाद चलिरहन्छ । जे होस् अहिलेका फुटबल फ्यान पुस्ताहरु भाग्यमानी रहेका छन् किनभने यी दुई फुटबलका होनहार खेलाडीको खेल हेरी आनन्द लिइरहेका छन् ।
रोनाल्डोको ह्याट्रिकमा पोर्चुगल नेसन्स लिगको फाइनलमा
काठमाडौँ । स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ह्याट्रिकको मदतमा पोर्चुगल युईएफए नेसन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राति सम्पन्न खेलमा पोर्चुगलले स्विटजरल्याण्डलाई ३–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।
रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोड्दा दुबै पक्षलाई महँगो बनेको सिजन
एजेन्सी । पोर्चुगिज खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोडेको पनि झण्डै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । सन् २०१८ को जुलाईमा उनी इटालियन क्लब युभेन्ट्स पुगेका थिए । उनले क्लब छोडेपछि दुबै पक्षलाई फाइदा भएको छैन ।
यसकारण फिट छन् क्रिस्टियानो रोनाल्डो
एजेन्सी । पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो सफल फुटबलर हुन् । पाँचपटक फिफा वर्ष खेलाडी भएका उनी ३३ वर्षका भइसके। तैपनि, स्वस्थ जीवनशैली
एजेन्सी । युभेन्ट्सका केही खेलाडीहरुमा चरम असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ । तीमध्येका एक खेलाडी हुन् पाउलो ड्याबला । उनले युभेन्ट्स छोड्न चाहेको बताइएको छ ।
रोनाल्डो भन्छन्ः खेल जिते मेस्सी, हारे कोटिन्हो र भल्भरडेलाई दोष, यो कहाँको न्याय हो
एजेन्सी । ब्राजिलियन लिजेण्ड रोनाल्डो नाजारियो जसले बार्सिलोना र रियल मड्रिडबाट खेल खेले उनले बार्सिलोनाबाट च्याम्पियन्स लिग बाहिरिनुबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्,‘ बार्सिलोना पराजित हुँदा प्रशिक्षक अरनेस्टो भलभर्डे र फिलिपिन्हो कोटिन्होलाई दोष लगाउने र जित्दा मेस्सीलाई सबै क्रेडिट दिने यो कहाँको सम्मान हो ?’
रोनाल्डोको बुगाटी संसारकै महँगो कार (फोटोमा)
एजेन्सी । युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले संसारकै सबैभन्दा महँगो कार खरिद गरेका छन् । ३४ वर्षीय रोनाल्डोले बुगाटी ला भुइचर नोयर कार खरिद गरेका हुन् ।
एजेन्सी । युभेन्ट्स लिजेण्ड मार्को टारडेलीले स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कारण केही खेलाडीहरुको भविष्य ओझेलमा परेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘युभेन्ट्समा रोनाल्डोको आगमनल् केही राम्रा खेलाडीले खेल्ने मौका निकै कम प्राप्त गरे । उनीहरुको भुमिकामा साँधुरिएको क्लबले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ ।’